Mbanye: Chọta njikọ azụmahịa na Google | Martech Zone
Ọ bụrụ n'ị na-achọ njikọ azụmahịa gafee netwọkụ mmekọrịta, Google bụ nnukwu ngwaọrụ. Ọtụtụ mgbe m na-eme ọchụchọ Twitter + aha, ma ọ bụ LinkedIn + aha ịchọta profaịlụ. N'ezie, LinkedIn nwere nnukwu injin nchọ (ọkachasị ụdị akwụ ụgwọ) yana enwekwa saịtị dị ka Data.com ịchọta njikọ. Ọtụtụ mgbe, anaghị m eji Google ọ bụla. Ọ bụ n'efu ma na ọ ziri ezi!
Mbanye E wuru karịsịa maka ndị na-ewe ndị ọrụ ọrụ ka ha wee nwee ike ịchọta ndị ga-achọ inweta ọrụ na ntanetị. Emebere ya iji mepụta ajụjụ ọchụchọ boolean na-akpaghị aka iji chọọ Google maka ozi ịchọrọ. Ọ bụkwa nnukwu ngwaọrụ maka ndị ọkachamara n’ahịa ndị na-achọ ịchọta ndu site na saịtị mgbasa ozi mmekọrịta LinkedIn, Google+, GitHub, Xing, Stackoverflow na Twitter.
The interface doro anya ma dị mfe:
Ozugbo itinyechara ozi gị niile, a na-ewu ajụjụ ọchụchọ ahụ:
Tags: ahịa b2bchọta b2b na-eduga n'ịntanetịGitHubgithub ọchụchọgoogle searchgoogle +na-eduga n'ịntanetịLinkedInnjikọ njikọọchụchọ n'ịntanetịmbanyembanyeStackoverflowstackoverflow ọchụchọTwitternyocha twitterXINGịchọ xing